1 Samuel 4 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Samuel Nhoma a Edi Kan 4:1-22
Filistifo no gyee Adaka no (1-11)
Eli ne ne mma wuwui (12-22)
4 Enti Samuel kɔɔ so kasa kyerɛɛ Israel nyinaa. Na Israel kɔe sɛ wɔrekohyia Filistifo ne wɔn akɔko, na wɔkɔsoɛɛ baabi a ɛbɛn Ebeneser; Filistifo no nso kɔsoɛɛ Afek. 2 Filistifo asraafo boaa wɔn ho ano kohyiaa Israel, na Israelfo dii nkogu wɔ Filistifo anim ma wokunkum mmarima bɛyɛ 4,000 wɔ akono. 3 Bere a ɔman no san baa asoɛe hɔ no, Israel mpanyimfo no kae sɛ: “Adɛn nti na nnɛ Yehowa ama yɛadi nkogu* wɔ Filistifo anim yi?+ Momma yɛnkɔfa Yehowa apam adaka no mfi Silo mmra yɛn nkyɛn,+ na ennye yɛn mfi yɛn atamfo nsam.” 4 Enti ɔman no somaa mmarima kɔɔ Silo sɛ wɔnkɔfa asafo Yehowa a ɔte kerubim so*+ no apam adaka no mmra. Ná Eli mma mmarima baanu no, Hofni ne Finehas,+ nso wɔ nokware Nyankopɔn no apam adaka no ho. 5 Bere a Yehowa apam adaka no beduu asoɛe hɔ ara pɛ, Israelfo nyinaa bɔɔ ose kɛse maa asaase wosowee. 6 Filistifo no nso tee osebɔ no, na wobisae sɛ: “Osebɔ bɛn na ɛrekɔ so wɔ Hebrifo asoɛe hɔ no?” Akyiri yi, wɔtee sɛ Yehowa Adaka no na wɔde aba asoɛe hɔ. 7 Filistifo no suroe, na wɔkae sɛ: “Onyankopɔn aba asoɛe hɔ!”+ Ɛnna wɔkae sɛ: “Asɛm ato yɛn, efisɛ biribi sɛɛ nsii da! 8 Asɛm ato yɛn! Hena na obegye yɛn afi otumfo Nyankopɔn yi nsam? Onyankopɔn yi na okunkum Egyptfo bebree wɔ sare no so no.+ 9 Mo Filistifo, munnya akokoduru, monyɛ mmarima na moansom Hebrifo no sɛnea wɔasom mo no;+ monyɛ mmarima na monko!” 10 Enti Filistifo no koe, na Israel dii nkogu+ maa obiara guan kɔɔ ne ntamadan mu. Nnipa a wowuwui no, na wɔdɔɔso paa; Israel asraafo* 30,000 na wowuwui. 11 Afei wogyee Onyankopɔn Adaka no, na Eli mma baanu no, Hofni ne Finehas nso wuwui.+ 12 Saa da no, Benyamini bi fi akono hɔ tuu mmirika baa Silo; ná wasuan n’ataade mu de dɔte agu ne tirim.+ 13 Bere a ɔbarima no bedui no, na Eli te agua so wɔ kwankyɛn retwɛn, efisɛ nokware Nyankopɔn no Adaka no+ nti, na ne yam hyehye no. Ɔbarima no kɔbɔɔ amanneɛ wɔ kurow no mu, na kurow no mufo nyinaa maa wɔn nne so sui. 14 Bere a Eli tee osũ no, obisae sɛ: “Dede bɛn na ɛrekɔ so yi?” Ɔbarima a ɔde nkra no bae no yɛɛ ntɛm kɔbɔɔ Eli amanneɛ. 15 (Ná Eli adi mfe 98, na na n’ani gu so kwa, efisɛ na onhu ade.)+ 16 Ɛnna ɔbarima no ka kyerɛɛ Eli sɛ: “Mene nea ofi akono bae no; ɛnnɛ yi ara na miguan fii akono bae.” Enti obisaa no sɛ: “Me ba, asɛm bɛn na asi?” 17 Na ɔbarima a ɔde nkra no bae no buae sɛ: “Israel aguan wɔ Filistifo anim, na ɔman no adi nkogu kɛse;+ wo mma mmarima baanu no, Hofni ne Finehas, awuwu,+ na nokware Nyankopɔn no Adaka no nso, wɔagye.”+ 18 Saa bere no, na Eli te kurow pon no ano, na bere a ɔtee nokware Nyankopɔn no Adaka no ho asɛm ara pɛ, ɔtew kɔɔ n’akyi wɔ n’agua so kɔhwee fam, na ne kɔn mu bui ma owui, efisɛ na wabɔ akwakoraa, na na ne mu nso yɛ duru. Ná wayɛ Israel temmufo mfe 40. 19 Ná n’asebea a ɔyɛ Finehas yere nyem, na na n’awo reyɛ adu. Bere a ɔbea no tee sɛ wɔagye nokware Nyankopɔn no Adaka no, na n’asebarima ne ne kunu nso awuwu no, awo kaa no amonom hɔ ara, enti ɔkotowee na ɔwoe. 20 Bere a wɔregye no awo no, na ɔrewu, na mmea a wogyinagyina ne nkyɛn no kae sɛ: “Nsuro, efisɛ woawo ɔbabarima.” Nanso wammua, na wamfa n’adwene ankɔ so.* 21 Mmom ɔtoo abofra no din Ikabod,*+ na ɔkae sɛ: “Anuonyam afi Israel akodi baabi.”+ Nokware Nyankopɔn no Adaka a wɔagye ne nea ɛtoo n’asebarima ne ne kunu nti na ɔkaa saa.+ 22 Ɔkae sɛ: “Anuonyam afi Israel akodi baabi, efisɛ wɔagye nokware Nyankopɔn no Adaka no.”+
^ Nt., “Adɛn nti na Yehowa adi yɛn so nkonim yi?”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “kerubim ntam.”
^ Anaa “asraafo a wɔnam fam.”
^ Anaa “wamfa ne koma ankɔ so.”
^ Ɛkyerɛ, “Anuonyam No Wɔ He?”